ကြေးဝါနှင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်စုံတွဲထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းလျှော့ချ - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PEX ပိုက်ပြင်စနစ် > PEX ပိုက်ပြင် System ကိုကြေးဝါ Fittings > ကြေးဝါနှင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်စုံတွဲလျှော့ချ
weâ€, ပြည့်စုံသောအင်ဂျင်နီယာနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ကျွမ်းကျင်မှု market.If သင့်လျော်သောကြေးဝါအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကိုကျော်ရရှိခဲ့နှင့်အတူသင်တစ်ဦးဒီဇိုင်းကိုစိန်ခေါ်မှုရှိ WENAP ထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တောင်းဆိုကြောင်းတသမတ်တည်းအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းစွမ်းဆောင်ရည်များကိုအာမခံချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးထုတ်လုပ်နေသည် ™အဆင်သင့်ပြန်လည်။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းပုံကြမ်း-အဆင်သင့်သို့မဟုတ်နေဆဲအယူအဆအဆင့်ရှိမရှိ, သင့်စီမံကိန်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ယူနိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ရှိသည်။ အစောပိုင်းအဆင့်တွင်စီမံကိန်းများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများနောက်ဆုံးရေးဆွဲသို့ရှိသူများအတွေးအခေါ်များပြောင်းလဲသင်တို့နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ နောက်ထပ်တီထွင်စီမံကိန်းများအတွက်ကျနော်တို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီဇိုင်းများ Full-စကေးထုတ်လုပ်မှုများအတွက် optimized နေကြသည်အာမခံပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလမျးဖွောငျ့ကြေးဝါနိဒါန်း uct သို့မဟုတ်စုံတွဲလျှော့ချ
စုံတွဲတစ်တွဲနှစ်ခုပိုက်ဆက်သွယ်။ သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားကွာခြားလျှင်, လျောက်ပတ်တဲ့လျှော့ချနားချင်းဆက်မှီ, လျှော့ချ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး adapter အဖြစ်လူသိများသည်။ နှစ်ခုသစ်သားဆက်စရာအမျိုးအစားများရှိပါတယ်:; ပုံမှန်အစည်းအဝေး & quote & quote; နှင့် & quote; စလစ် & quote ;. တစ်ဦးကပုံမှန်အစည်းအဝေးနားချင်းဆက်မှီ Over-သွင်းတဲ့ပိုက်၏, ဤသို့အောက်မှာ-သွင်း (တစ်ဦးစိတ်မချရကွန်နက်ရှင်မှုလို) အခွားပိုက် segment ကို၏ကာကွယ်တားဆီးဖို့, သေးငယ်တဲ့ခေါင်ရှိပါတယ်သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းရပ်တန့်။ တစ်ဦးကစလစ်နားချင်းဆက်မှီ (တစ်ခါတစ်ရံလည်းပြုပြင်နားချင်းဆက်မှီခေါ်) တမင်တကာကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောချေးကြောင့်သေးငယ်တဲ့ယိုစိမ့်ရှိပါတယ်သို့မဟုတ် burst အေးခဲစေတဲ့ပိုက်၏ပြုပြင်အဖြစ်တင်းကျပ်စွာနေရာများအတွက်အရပ်သို့ချော်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, ဒီပြည်တွင်းရေးရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲဖန်ဆင်းထားသည် ဒါမှမဟုတ်တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်ယာယီဖြတ်ခံရခဲ့သည့်။ အဆိုပါ alignment ကိုရပ်တန့်ပျောက်နေကတည်းကကြောင့်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်မှန်ကန်စွာတည်ရှိသောကြောင်းသေချာစေရန်စလစ်နားချင်းဆက်မှီ၏နောက်ဆုံးတည်နေရာတိုင်းတာရန် installer ကိုမှတက်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုuct Parameter of the Brass Straighစုံတွဲ t သို့မဟုတ်လျှော့ချ
Brass Straighစုံတွဲ t သို့မဟုတ်လျှော့ချ
SDR DN16mm-DN32mm ကနေ 7.4 အဆင့် PE-X ကိုပိုက်
အပူ, အတု, ပိုး, လျှော်ဖြတ်တောက်, tempering
စသည်တို့ကိုဖြောင့်, တံတောင်ဆစ်, Tee, အဆို့။
100 အ PCs
ပူ / အအေးပြည်တွင်းရေ syste
သေးငယ်တဲ့ပလပ်စတစ်အိတ် / စက္ဏူထူခုနှစ်တွင်ထို့နောက်ကြီးတွေစက္ဏူထူ, စံတင်ပို့ထုပ်ပိုး
ရက်ပေါင်း 30 သိုက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်
ထုတ်လုပ်မှုuct Feature and Application of the Brass Straighစုံတွဲ t သို့မဟုတ်လျှော့ချ
အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြေးဝါလှံတံ၏ 1.Made, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာလုပ်လုပ်ငန်းများ၌ပူ Forge ရဲ့။
2.Technology: Forge, CNC နေဖြင့်စက်ပစ္စည်းမြင့်မားသောတိကျသေချာစေရန်။
3. ကြေးဝါနှင့်ဥစ္စာတင်ပို့ကျော် 5years အတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူ, ကြှနျုပျတို့သညျဤလယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်အဖြစ်ထုတ်ကုန်စေနိုင်သည်''s ကိုလိုအပ်ချက်များကို။
လျှောက်လွှာ:ပူ / အအေးပြည်တွင်းရေစနစ်က
ထုတ်လုပ်မှုuct Details of the Brass Straighစုံတွဲ t သို့မဟုတ်လျှော့ချ
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး:In cartons/pallets/according to customer''s ကိုလိုအပ်ချက်များကို။
hot Tags:: ကြေးဝါနှင့်ဖြောင့်သို့မဟုတ်စုံတွဲ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, လက်ကားတရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းစက်ရုံ, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality လျှော့ချ